PowerDirector အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ဗီဒီယိုဖွင့်စနစ်နှင့် တည်းဖြတ်စနစ်များ » PowerDirector - Video Editor, Video Maker
ဗီဒီယိုဖွင့်စနစ်နှင့် တည်းဖြတ်စနစ်များ | 78.2MB
Powerirector - အကောင်းဆုံး featured
။ တေးဂီတ, အသွင်ကူးပြောင်းမှု, အဆိုကိုခေါင်းစဉ်များ, သက်ရောက်မှုများ, Emoji, နောက်ခံ, စစ်ထုတ်စက်များထည့်ပါ။
သည်ကောင်းကျိုးများနှင့်အလွယ်တကူပါ0င်သည်။ သင်သည်ရုပ်ရှင်ကားသစ်ရုပ်ရှင်များ, သင်၏နောက်ဆုံးစွန့်စားခန်း၏ဗီဒီယိုများဖန်တီးသည်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးများကိုဝေမျှရန်ကလစ်များပေါင်းစပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးများကိုဝေမျှရန် Clips များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
လစဉ်မွမ်းမံသောအင်အားကြီးသောတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလိုလိုသိသော app interface တစ်ခုဖြစ်သော, သင်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်အံ့အားသင့်စေမည့်ပြီးပြည့်စုံသောဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဓါတ်ပုံများ, တေးဂီတ, အသံများ, အသံထွက်များ, ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် Snapchat တို့တွင်ပါ0င်ရန်ဓာတ်ပုံများ, တေးဂီတ, ခိုင်မာတဲ့> သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလွှတ်ပေးပါ။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုများဖန်တီးပါ။
powerirector ကိုမြန်နှုန်းနှင့် utility ကိုစိတ်ထဲထည့်သွင်းထားသည်။ 64-bit ကိရိယာများတွင်တည်းဖြတ်ခြင်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့, snappier နှင့် ပို. ပျော်စရာကောင်းသည်။ သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးသင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြည့်ရှုပါ။
- ရုပ်ပုံနှင့်မျက်နှာဖုံးများရှိရုပ်ပုံများအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, လည်ပတ်ခြင်း, နေရာနှင့်စကေးကိုညှိပါ။
1 ။ ဗွီဒီယိုများကို
2 ။ အစာရှောင်ခြင်းရှေ့သို့သို့မဟုတ်နှေးကွေးသောဗီဒီယိုများကို
ဗွီဒီယိုတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ Shaky cam ရိုက်ကူး fix
4 ။ Eye-catching intros
နှင့်အတူ burning ထုတ်လုပ်ရန်။ 5
အတွက် Quirky အသံဖိုင်များနှင့်အတူစမ်းသပ်စမ်းသပ်မှု
Chroma-key ကို အသုံးပြု. အစိမ်းရောင်မျက်နှာပြင်တည်းဖြတ်သူနှင့်နောက်ခံကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။ 7
7 ။ ဗွီဒီယိုမှနှစ်ဆထိတွေ့နိုင်သောထိတွေ့မှုသက်ရောက်မှုများကိုဗွီဒီယိုဖြင့်ဖန်တီးပါ။
•ခြယ်မှု, splice နှင့် roticate ဗီဒီယိုများကိုတိကျစွာဖြင့်အရောင်တင်ခြင်း, အရောင်နှင့်ပြည့်ဝမှုကိုတိကျစွာဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဆွဲယူခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုများကို အသုံးပြု. ရိုက်ကူးပါ Timeline
•စာသားသို့မဟုတ်ကာတွန်းခေါင်းစဉ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထည့်ပါ။ •သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းတွင် built-in Editor တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံလွှင့်ချက်ကိုထည့်ပါ။ • Pip Overlays နှင့်ဗွီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံပုံများကိုဖန်တီးခြင်း *
•လွတ်လပ်သောတင်းပလိတ်များ, ဗီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, စစ်ထုတ်ခြင်းများ, နောက်ခံသီချင်းများနှင့်အသံများကိုခံစားခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှယ်ယာရွေးချယ်မှုများနှင့်သင်လိုအပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိရိယာများအားလုံးကိုရယူပါ။ •သီးသန့်ပရီမီယံပါဝင်မှု (အရောင်စစ်ထုတ်ခြင်းများ, အကူးအပြောင်းများ, အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ဗွီဒီယို0န်ဆောင်မှုများ)
•စတော့ရှယ်ယာမီဒီယာအကြောင်းအရာများ - စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပင် (တေးဂီတ, ဓါတ်ပုံများ, စတစ်ကာများ, စတစ်ကာများ, စတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်း)
•အကောင်းဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအတွက်စွမ်းအားများတပ်ဆင်ထားသည်။ • Ad-Free နှင့် Drustracy Free
Shutterstock က Powerive Massive, Royalty-Free Shrichrary ။ ဗွီဒီယိုစီမံကိန်းများအားရာပေါင်းများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတော့ရှယ်ယာဗီဒီယိုများ, ဓါတ်ပုံများနှင့်တေးဂီတတို့ဖြင့်ဗွီဒီယိုစီမံကိန်းများဖန်တီးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Instagram တွင် Instagram တွင် Instagram တွင် Instagram တွင်ရှာဖွေခြင်း - @Powerdirector_app
Premium Subscription သည်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည် သက်တမ်းတိုးသည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ 24 နာရီ။ သင်၏0ယ်ယူပြီးနောက်သင်၏အကောင့်ချိန်ညှိချက်များသို့ သွား. သင်၏အကောင့် settings ကို သွား. အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ စတိုးဆိုင်ပေါ်လစီနှင့်အညီတက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းခြင်းကာလအတွင်းလက်ရှိ subscription ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။0ယ်ယူပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အသုံးမပြုရသေးသောအပိုပစ္စည်းများအတွက်ပြန်အမ်းငွေများမပေးပါ။
ဘာထူးသလဲ PowerDirector - Video Editor, Video Maker
Android လိုအပ်သည်: Android 5.0 or later
ko pine ko pine
ဗီဒီယိုပြုလုပ်သူ - Video.Guru